Realme X2 Pro waa rasmi: qaababka, qeexitaanada iyo qiimaha | Androidsis
Realme X2 Pro waa rasmi: qaababka, qeexitaanada farsamada iyo qiimaha
In badan ayaan ka hadalnay isaga Realme X2 Pro toddobaadyadii la soo dhaafay, laakiin waxay ahayd qaab saadaalin ah, maadaama ay hadda laga bilaabo tahay in la heli karo iyada oo ay ugu mahadcelineyso daah-furkeedii rasmiga ahaa ee ugu dambeeyay ee maanta ka dhacay Shiinaha, Oktoobar 15.
Sida aan filayno, Waxaan ka hadleynaa dhamaadka-sare ee u adeega guri ahaan Snapdragon 855 Plus, mid ka mid ah Chipsets-ka ugu awoodda badan maanta oo ku lammaan qeexitaannada kale ee farsamo ee abtirsiinta. Taasi waa sababta aan kuu siineyno booskaaga fursaddan cusub
1 Wax walba oo ku saabsan Realme X2 Pro
1.1 Realme X2 Pro qiimaha iyo taariikhda la siidaayo
Wax walba oo ku saabsan Realme X2 Pro
Bilawga, taleefankan casriga ah ee cusub a 6.5-inji AMOLED oo leh FullHD + xallinta 2,340 x 1,080 pixels iyo bucshiro qaab-biyood leh. Difaac ahaan, waxaa daboolaya muraayadda Corning Gorilla Glass 5. Waxa kale oo ay taageertaa heerka cusbooneysiinta 90 Hz, sida midka cusub. OnePlus 7T Pro.
Muuqaalku wuxuu bixiyaa illaa 1,000 nits dhalaal wuxuuna la yimaadaa taageerada midabka midabka DCI-P3. Sidoo kale, waxaa hoostiisa ku yaal sawir qaade ah oo qalabka ku furi kara kaliya 0.23 ilbiriqsi, sida ay sheeganeyso shirkadda. Dhanka kale, moobilku wuxuu ballan qaadayaa saamiga shaashadda-jirka ee 91.7%.
Realme X2 Pro, sidaan u eegnay bilowgii, wuxuu leeyahay Snapdragon 855 Plus. Sideed-xuddunta SoC, oo ka shaqeeya ugu badnaan saacadda ee 2.96 GHz, waxaa weheliya Adreno 640 GPU, iyo sidoo kale 6/8/12 GB RAM iyo meel gudaha ah oo lagu kaydiyo oo ah 128/256 GB aan la ballaarin karin. Kala-baxa kuleylka, wuxuu leeyahay qaboojiye dareeraha qolka uumiga, Superconducting nidaamka lakabka badan ee kaarboonka, bireedka garaafka lakabyada badan, iyo waxyaalaha kale ee diiriya kuleylka, halka batari 4,000mAh ah oo leh 50-watt SuperVOOC taageero deg deg ah lagaarsiiyo.
Nidaamka hawlgalka ee 'Android 9 Pie', oo lagu dhajiyay nooca caadiga ah ee ColorOS 6.1 ee Realme, ayaa ku jira qalabka. Caawinta mashiinka toosan ee taabashada ah aaladda dhexdeeda waxay ka caawisaa 4D gariirka ciyaarta.
Realme ayaa iftiimisay in X2 Pro uu qaadanayo 10 daqiiqo oo kaliya si uu 40% ugaga helo kororka. Qalabka waxaa si buuxda loogu soo oogi karaa 35 daqiiqo teknolojiyadda cusub ee xawaareynta dhakhsaha badan leh. Taleefanka casriga ahi wuxuu kaloo taageeraa tikniyoolajiyadaha kale ee lacag-ku-shubista sida USB-PD iyo Qualcomm oo ah 18-watt oo si dhakhso ah looga qaado.
Realme X2 Pro wuxuu leeyahay module kamarad toosan qeybta kore ee qeybta dambe. Waxaa ku jira afar dareemayaal kuwaas oo ah 1 megapixel Samsung GW64 lens oo leh f / 1.8 aperture, lens-ka telephoto 13-megapixel oo leh taageero ilaa 20x zoom hybrid, a 8-megapixel aalladda xagal-ballaadhan leh oo leh aragti 115 ° ah, iyo dareeraha qoto dheer ee 2-megapixel. Taleefanka casriga ahi wuxuu bixiyaa astaamo kamarado ah sida muuqaalka goobta habeenkii, EIS, 4K duubista fiidiyowga ee 30fps iyo fiidiyoowyada gaabiska ah ee 960fps.
Realme X2 Pro Master Edition Sibidhka
Qaadashada sawir-gacmeedka, dhammaadka-sare waxaa lagu qalabeeyaa A-ku-shaqeeya 16-megapixel shooter oo leh taageero loogu talagalay goobta habeenka weyn oo ay weheliso tikniyoolajiyadda isku-darka pixel 4-in-1.
Realme X2 Pro sidoo kale waxay la socotaa dhammaan astaamaha isku xirnaanta muhiimka ah., sida ay tahay labada taageero ee SIM, 4G VoLTE, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS laba jeer soo noqnoqda, NFC, iyo qalabka dhageysiga maqalka ee 3.5mm wanaagsan. Taleefanka ayaa sidoo kale lagu qalabeeyaa laba afleemo oo rikoodh ah oo ay la socdaan Dolby Atmos iyo teknoolojiyada codka ee Hi-Res.
Realme X2 Pro qiimaha iyo taariikhda la siidaayo
Realme X2 Pro pre-amarada bilaabmaya maanta way sii socon doonaan waxayna dhamaan doonaan Oktoobar 17. Iibinta ugu horeysa ee taleefanku waxay dhici doontaa Oktoobar 18 markay tahay 10:00 am (waqtiga maxalliga ah ee Shiinaha). Kani wuxuu yimaadaa Dayax (caddaan) iyo Poseidon (buluug) Shirkaddu waxay u soo bandhigi doontaa qiimo dhimis 100 yuan ah iibsadayaasha dalbanaya Realme X2 Pro illaa iibka ugu horreeya. Qiimaha noocyada kala duwan ee Realme X2 Pro waa:
6 GB RAM + 64 GB kaydinta (UFS 2.1): 2,599 yuan (~ 333 euro ama 367 doolar).
8 GB RAM + 128 GB kaydinta (UFS 3.0): 2,799 yuan (~ 359 euro ama 395 doolar).
12GB RAM + 256GB Kaydinta Master Edition (USF 3.0): 3,199 yuan (~ 410 euro ama 452 doolar).
El Realme X2 Pro Master Edition, oo ah 12GB RAM iyo 256GB ROM oo uu abuuray naqshadeeyaha reer Japan Naoto Fukasawa, ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay munaasabadda. Waxay ku timaaddaa midabbo badan waxayna ku leedahay saxeex naqshadeeye xagga dambe. Red Brick iyo Cement (cirro madow) ayaa ah labada nooc ee midabbada ah casriga Realme X2 Pro Master Edition. Waxaa loo heli doonaa iibsasho laga bilaabo Nofeembar 11 Shiinaha. Qeybihii ugu horreeyay ee 100 ee 'Master Edition' waxaa lagu heli doonaa qiimo dhimis dhan 100 yuan (~ 13 euro ama 14 doolar)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Realme X2 Pro waa rasmi: qaababka, qeexitaanada farsamada iyo qiimaha
OPPO A11: Nooca cusub ee bartamaha